Milateriga Soomaaliya oo kala dhex galay beelo ku dagaalamay Caabudwaaq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milateriga Soomaaliya oo kala dhex galay beelo ku dagaalamay Caabudwaaq
Mareeg.com: Ciidamo ka tirsan milateriga Soomaaliya ayaa kala dhex galay labo maleeshiyo beeleed oo shalay ku dagaallamay degmada Caabduwaaq ee gobolka Galgaduud.
Taliyaha qeybta 21-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya, Col. Sulub Axmed Diiriye Shabeeloow oo gaaray degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidanka XDS gaar ahaan qeybta 21-aad ee fadhigeedu yahay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ay kala dhex galeen maleeshiyo beeleedyo walaalo ah oo ku dagaalamay magaalada Cabuudwaaq.
Col. Sulub ayaa warbaahinta u sheegay inuu halkaasi u tegay hakinta dagaal beeleed ka qarxay degmada Caabudwaaq, isagoo xusay iney ciidamadu ku guuleysteen hakinta dagaalkaasi, kadib markii ay kala dhexgaleen malleeshiyaad beeleedka ku dagaalamay gudaha degmada Caabudwaaq.
Dhanka kale, Sulub Axmed Diiriye ayaa xusay in dagaalkaasi ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, isagoo tilmaamay in tirada dhimashada ay gaareyso ilaa 8 qof inta la ogyahay, halka dhaawacana uu ku sheegay ilaa 20 ruux, wuxuuna tibaaxay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba dhamaantood ay ka mid ahaayeen dadka ku nool deegaanka.
Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaankaasi ay haatan ku howlanyihiin sidii ay muwaafaqo u dhex dhegi lahaayeen dhinacyada ku dagaalamay Caabudwaaq, islamarkaana loo baajin lahaa dagaal markale ka dhaca halkaasi.
Dagaalka Caabduwaaq ayaa ah mid ku saleysan aano qabiil, waxaana dedaalka xallinta qeyb ka qaadanaya beelo kale oo ka baxsan labada beelood ee dagaalamay.
AS Casualty rise in central somali tribal Fighting the Somali army intervene